U-DJ KHALED KUNYE NO-RAPPER U-DRAKE BABELANA NGOMHLOLOKAZI OMTSHA WOMCULO WOKULINGANISA IHLOBO - UBONISO
Kwinxalenye ebalulekileyo ye-2020, u-rapper u-Drake wayeqhula abalandeli bakhe abazizigidi ezingama-69.1 kwi-Instagram ngeengoma ezintsha.
Kwinxalenye ebalulekileyo ye-2020, u-rapper u-Drake wayeqhula abalandeli bakhe abazizigidi ezingama-69.1 kwi-Instagram ngeengoma ezintsha. Kuyinyani eyaziwayo ukuba unesabelo somculo esivuzayo kwisandi sakhe somculo esihlala sikhula.
Kodwa ngeli xesha, wayegcine yonke iphantsi kwaye ubambisene no-DJ Khaled hayi eyenye kuphela kodwa iingoma ezimbini ezintsha!
Zombini ezi ngoma zenziwa ngumdibanisi oqhelekileyo weDrake, OZ.
Abagxeki babona iGrisi njengengoma emnandi. Kwakhona, ukuthelekisa amazwi kaDrake kunye nelizwi leThe Weeknd, kunye nokufumana uhambo olutsala abaphulaphuli be pop kule mihla.
U-DJ Khaled kunye noDrake bathatha i-Shot ekudaleni umculo omtsha waseGrisi
U-Aubrey Drake Graham usandula ukukhupha i-albhamu yakhe, i-Dark Lane Demo Tapes. I-albhamu izaliswe ziingoma ezili-14 ebezisebenza kulo rapper. Xa kuthelekiswa nabo, ukukhululwa kwakhe kwangoko kunye no-DJ Khaled kuye kwaba yinto enhle kakhulu.
Ingoma, i-'Grisi 'ka-DJ Khaled no-Drake bathetha ngezinto ezibalulekileyo ezifana no-Gucci no-Louis Vuitton abagubungela iinqwelomoya eziya e-Greece nase-Paris. Ewe, le ngoma ayinanto intsha. Kodwa ibeka italente yePopstar enobuchule obubonakalayo. UDrake ubeke izandla zakhe phantsi kwingoma, iGrisi, ethetha nenkcubeko etyebileyo ye-champagne.
U-DJ Khaled kunye noDrake bazukisa umfanekiso wePopstar ngelixa bebonisa umzabalazo wokwenyani
UDJ Khaled noDrake basebenze kwiingoma ezimbini, kwaye eyesibini yiPopstar. Kule, i-rapper eneminyaka engama-33 ubudala ixhaphaza malunga nokuba yinkwenkwezi ephumeleleyo kwihlabathi liphela. Uthe ukuba umzabalazo uyinyani.
Kule ngoma kwakhona, bekukho umculo omncinci kunye nokudlwengulwa kunye nokuphazamiseka. Kodwa inomdla. Ngaphandle koko, akukho mculo omninzi wehlobo ujikeleze njengangoku. Ke ukukhutshwa kutsha kuya kuwenza umsebenzi.
Zombini iGrisi kunye nePopstar ngoku ziyafumaneka kuwo onke amaqonga.
UDrake kutshanje uthathe i-intanethi emva kokuba eposte imifanekiso yonyana wakhe, uAdonis. Kudliwanondlebe naye, uRap Radar, wade wathi wenza uvavanyo lwe-DNA ukuqinisekisa ukuba wayengutata nanjengoko wayengafuni kukhupha iindaba ezingezizo.
Ingoma iqhuba njani kwiitshathi?
Ingoma, ene-duo enkulu, yenza kakuhle kwiitshathi.
Ukufikelela kwinani lesithathu kwi ICanada eshushu eyi-100 .
Kwakhona, ngaphandle kweKhanada, le ngoma yafaka iitshathi eGrisi, yafikelela kwiitshathi ezilishumi eziphezulu eNew Zealand, e-United Kingdom nase-United States, ezingamashumi amabini aphezulu ezitshati eSwitzerland kunye namashumi amane aphezulu eetshathi e-Australia. , Ostriya, iBelgium (iFlanders), iJamani kunye neRiphabhlikhi yaseIreland.
I-overlord yexesha 4 iindaba
liphuma nini isherlock season 5
Ukuhamba kwexesha elifileyo 4 netflix
Amarhamncwa amnandi akhulula imihla
umtshato woqhawulo-mtshato waseKorea
Ixesha lesipili elitsha elimnyama 6